Hogaamiyaasha Midowga Yurub oo ku baaqaya in la joojiyo dhamaan safarada aan muhiimka ahayn Somali - Wararka Somalida, Caalamka
HomeWararka CaalamkaHogaamiyaasha Midowga Yurub oo ku baaqaya in la joojiyo dhamaan safarada aan muhiimka ahayn
Hogaamiyaasha Midowga Yurub oo ku baaqaya in la joojiyo dhamaan safarada aan muhiimka ahayn
January 22, 2021 Wararka Caalamka, Wararka Maanta Somaliska, Wararka Sweden 0
Foto: Olivier Hoslet / TT
Hogaamiyaasha Midowga Yurub waxay dadka ku booriyeen inay joojiyaan dhamaan safarada aan loo baahnayn ee u dhexeeya dalalkooda iyo wadamada laftooda si loo xadido faafitaanka nooca cusub ee faafa ee cudurka Coronavirus. Sida ay maanta qortay idaacada Sweden.
Hogaamiyaasha ururada waxay muujiyeen walaacooda sii kordhaya ee ku saabsan isbadalka viruska. Oo waxay go’aansadeen inay qaadaan tallaabooyin ay ku caawinayaan meelaha nooca cusub uu aad ugu badan yahay.
Waxay sidoo kale go’aansadeen in la dadajiyo tallaalka ka hortagga fayraska, si loo gaaro yoolka ah in la tallaalo boqolkiiba 70 dhammaan dadka waaweyn illaa xagaaga.
Hogaamiyaasha 27-ka dal ee xubnaha ka ah Midowga Yurub waxay qabteen shir fiidiyoow ah oo bilowday Khamiista oo uu ka qeyb galayo Ra’iisul Wasaaraha Sweden Stefan Leuven, si loo abaabulo la dagaalanka faafitaanka Covid-19 iyo ka hortagga halista noocyada isbedelay ee fayraska.